သရဏဂုံအကျိုးကြောင့် (၇)နှစ်သားအရွယ်ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရသူ အကြောင်း – Youth Bar
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသရဏဂုံကို အကြောင်းခံပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိခဲ့ဖူးတယ် ။ ‘သရဏဂုံမထေရ်’ လို့ပဲအမည်တွင်ခဲ့ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကသာဝတ္ထိပြည်မှာ ၇-နှစ်သားအရွယ်သူငယ်ကလေး တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ကလေးတို့ဘာဝ ကစားဖော် ကလေးများနှင့်
ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက် တစ်ခုထဲရောက်သွားကြတယ်။ ကျောင်းတိုက်ထဲမှာသီတင်းသုံးတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးကပျူ ပျူ ငှာငှာ ကလေးများကို နှုတ်ဆက်မေးစမ်းပြီးသရဏဂုံသုံးပါးကို ရွတ်ဆိုသင်ပြပေးလိုက်တယ်။သူကြွယ်သားကလေးဟာ ‘ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ’လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ရိုးတွင်းချ ဉ်ဆီခိုက်အောင်ပီတိတွေဖြစ်သွားတယ်။ အိပ်ပျော်နေရာကဖြုန်းကနဲနိုးလာပြီးတစ်စုံတစ်ခု သတိရလိုက်သလိုမီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေတဲ့ အသိတွေ ဘွားခနဲပွင့်သွားတယ်။ သရဏဂုံကို အကြောင်းပြု ပြီးဝိပဿ နာဥာဏ် ဝင်စားလိုက်တာ အဲဒီနေရာမှာပဲခုနစ်နှစ်သားကလေး ရဟန္တာဖြစ်တော်မူသွားသတဲ့။
သတ္တဝါတို့မည်သည် နောက်ကြောင်းကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဘဝနောက်ခံ ကိုယ်စီပါကြသည်လို့မှတ်ရမယ်။အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ ဘဝတစ်ခုခုက ထိထိခိုက်ခိုက်နှလုံးသွင်း လေ့ကျင့်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟာတစ်သံသရာလုံး အကျိုးဖြစ်စေတယ်။နှယ်နှယ်ရရ မမှတ်ကြနှင့်။ဒီ ( ၇ )နှစ်သား သူကြွယ်သားကလေးဟာဟိုး —လွန်ခဲ့တဲ့ ၇-ဆူမြောက် ဝိပဿီမြတ်စွာ ဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းက ဗန္ဓု မတီပြည်ကမျက်မမြင် ဒုက္ခိတ မိဘနှစ်ပါးကိုပြု စုလုပ်ကျွေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။
ရဟန်းတော်တွေရဲ့ဘဝကို ဖူးမြင်ရတိုင်းသူ့မှာ အားကျတဲ့စိတ် ဖြစ်ရှာတယ်။သို့ပါသော်လည်းပဲ. . .‘သြော်. . .ငါ့မှာ မျက်မမြင်မိဘ နှစ်ပါးကိုလုပ်ကျွေးပြု စုရမယ့် တာဝန်ရှိနေတယ်။သူများလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာဆိုရင်ရဟန်းပြုရသော် ကောင်းလေစွ’လို့မကြာခဏ စိတ်ကူးမိတယ်။နောက်ဆုံးတော့………‘မရနိုင်တာ’ တောင့်တနေလို့ အကျိုးမရှိဘူး။ သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်နေပြီးသရဏဂုံသုံးပါးနှင့် သေရင်လဲဒီဘဝ ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မှာပါပဲ’ဆိုပြီးနိသဘခေါ်တဲ့ အဂ္ဂသာဝကမထေရ် တစ်ပါးထံမှာသရဏဂုံ ဆောက်တည်ပြီး စွဲမြဲစွာ နေသွားတယ်။
အဲ. . .ဒီဘဝက သေတဲ့နောက်တာဝတိ ံသာမှာ ဖြစ်တယ်။သရဏဂုံ စွဲမြဲထုံသောကြောင့်အပါယ်လေးဘုံဆိုလျှင် ကြားပင်မကြားရဘဲဝိပဿီ သိခီ ဝေဿ ဘူ ကကုသန် ကောဏဂုံကဿ ပ ဂေါတမ. . . ဘုရား ၇-ဆူကာလတစ်လျှောက်လုံး ကမ္ဘာပေါင်းများစွာလူ့ပြည် နတ်ပြည်မှာပဲ လှည့်လည်ပြီးအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်ချ ည်း ကျင်လည်ခဲ့ရတယ်။ငါတို့ဂေါတမဘုရားရှင် လက်ထက်မှာခုနက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီခေတ်မှာ ပြောနေကြတဲ့ မီလျံနာ-ဘီလျံနာလောက်မက ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မဟာသာလ သူဌေးမျိုးမှာဖြစ်လာကြတယ်။
ဘဝနောက်ခံပါခဲ့သည့်အားလျော်စွာ‘ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ’လို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ဇာတိဿ ရ ဥာဏ်တွေရ ဘွားခနဲအတိတ်ဘဝက အလုပ်တွေပေါ်လာပြီးဝိပဿ နာဥာဏ် ဝင်စားလိုက်တာ ချက်ချင်းရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူသွားတယ်။အားကျ ဖွယ်ကောင်းလိုက်တာလေ။ဒါကြောင့် အနည်းဆုံး သရဏဂုံနှင့်နေ သရဏဂုံနှင့်သေကြရင် အရိယာဘဝသို့ မရ-မရောက်ကြရသေးစေကာမူအပါယ်ဘေးကြီးက စိတ်ချရပြီ။နတ်ပြည် ၆-ထပ် မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုအသာကလေး ရနိုင်တယ်လို့မမှိတ်မသုန်ယုံကြည်ကြရမယ်။သည့်ထက်ကောင်းတဲ့ ဂါထာမရှိဘူးဟူ၍ မှတ်။
ဘယ်လို အန္တရာယ်ကင်းတယ် စီးပွားတက်မယ်ဆိုပြီး သူပြော လူပြော ဘုရားဟော မဟုတ်တဲ့ဂါထာအသစ်အဆန်းတွေ မလိုက်ကြနဲ့။‘ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ’ ဆိုတဲ့ သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးနှင့် အရဟံ စသောဂုဏ်တော်မူရင်းတွေထက် ကောင်းတဲ့ဂါထာဘယ်မှာရှိလိမ့်မတုန်း။ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
(နယ်ခြားတောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိက ဦးဥတ္တမသာရ)
လုံးစုံများစွာ၊ သတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ဥပဒ်ရန်ဘေး၊ကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေ။အပ္ပမာဒေနသမ္မာဒေထ #crd
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသရဏဂုံကို အကြောင်းခံပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိခဲ့ဖူးတယ် ။ သရဏဂုံမထေရ် လို့ပဲအမည်တွင်ခဲ့ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကသာဝတ္ထိပြည်မှာ ၇-နှစ်သားအရွယ်သူငယ်ကလေး တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ကလေးတို့ဘာဝ ကစားဖော် ကလေးများနှင့်
ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက် တစ်ခုထဲရောက်သွားကြတယ်။ ကျောင်းတိုက်ထဲမှာသီတင်းသုံးတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ်တစ်ပါးကပျူ ပျူ ငှာငှာ ကလေးများကို နှုတ်ဆက်မေးစမ်းပြီးသရဏဂုံသုံးပါးကို ရွတ်ဆိုသင်ပြပေးလိုက်တယ်။သူကြွယ်သားကလေးဟာ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ရိုးတွင်းချ ဉ်ဆီခိုက်အောင်ပီတိတွေဖြစ်သွားတယ်။ အိပ်ပျော်နေရာကဖြုန်းကနဲနိုးလာပြီးတစ်စုံတစ်ခု သတိရလိုက်သလိုမီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေတဲ့ အသိတွေ ဘွားခနဲပွင့်သွားတယ်။ သရဏဂုံကို အကြောင်းပြု ပြီးဝိပဿ နာဉာဏ် ဝင်စားလိုက်တာ အဲဒီနေရာမှာပဲခုနစ်နှစ်သားကလေး ရဟန္တာဖြစ်တော်မူသွားသတဲ့။
သတ္တဝါတို့မည်သည် နောက်ကြောင်းကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဘဝနောက်ခံ ကိုယ်စီပါကြသည်လို့မှတ်ရမယ်။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ ဘဝတစ်ခုခုက ထိထိခိုက်ခိုက်နှလုံးသွင်း လေ့ကျင့်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟာတစ်သံသရာလုံး အကျိုးဖြစ်စေတယ်။နှယ်နှယ်ရရ မမှတ်ကြနှင့်။ဒီ ( ၇ )နှစ်သား သူကြွယ်သားကလေးဟာဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ၇-ဆူမြောက် ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းက ဗန္ဓု မတီပြည်ကမျက်မမြင် ဒုက္ခိတ မိဘနှစ်ပါးကိုပြု စုလုပ်ကျွေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။
ရဟန်းတော်တွေရဲ့ဘဝကို ဖူးမြင်ရတိုင်းသူ့မှာ အားကျတဲ့စိတ် ဖြစ်ရှာတယ်။သို့ပါသော်လည်းပဲ. . .သြော်. . .ငါ့မှာ မျက်မမြင်မိဘ နှစ်ပါးကိုလုပ်ကျွေးပြု စုရမယ့် တာဝန်ရှိနေတယ်။သူများလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာဆိုရင်ရဟန်းပြုရသော် ကောင်းလေစွလို့မကြာခဏ စိတ်ကူးမိတယ်။နောက်ဆုံးတော့မရနိုင်တာ တောင့်တနေလို့ အကျိုးမရှိဘူးသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်နေပြီးသရဏဂုံသုံးပါးနှင့် သေရင်လဲဒီဘဝ ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မှာပါပဲဆိုပြီးနိသဘခေါ်တဲ့ အဂ္ဂသာဝကမထေရ် တစ်ပါးထံမှာသရဏဂုံ ဆောက်တည်ပြီး စွဲမြဲစွာ နေသွားတယ်။
အဲ. . .ဒီဘဝက သေတဲ့နောက်တာဝတိ ံသာမှာ ဖြစ်တယ်။သရဏဂုံ စွဲမြဲထုံသောကြောင့်အပါယ်လေးဘုံဆိုလျှင် ကြားပင်မကြားရဘဲဝိပဿီ သိခီ ဝေဿ ဘူ ကကုသန် ကောဏဂုံကဿ ပ ဂေါတမ. . . ဘုရား ၇-ဆူကာလတစ်လျှောက်လုံး ကမ္ဘာပေါင်းများစွာလူ့ပြည် နတ်ပြည်မှာပဲ လှည့်လည်ပြီးအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်ချ ည်း ကျင်လည်ခဲ့ရတယ်။ငါတို့ ဂေါတမဘုရားရှင် လက်ထက်မှာခုနက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီခေတ်မှာ ပြောနေကြတဲ့မီလျံနာ-ဘီလျံနာလောက်မက ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မဟာသာလ သူဌေးမျိုးမှာဖြစ်လာကြတယ်။
ဘဝနောက်ခံပါခဲ့သည့်အားလျော်စွာဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိလို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ဇာတိဿ ရ ဉာဏ်တွေရ ဘွားခနဲအတိတ်ဘဝက အလုပ်တွေပေါ်လာပြီးဝိပဿ နာဉာဏ် ဝင်စားလိုက်တာ ချက်ချင်းရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူသွားတယ်။အားကျ ဖွယ်ကောင်းလိုက်တာလေ။ဒါကြောင့် အနည်းဆုံး သရဏဂုံနှင့်နေ သရဏဂုံနှင့်သေကြရင် အရိယာဘဝသို့ မရ-မရောက်ကြရသေးစေကာမူအပါယ်ဘေးကြီးက စိတ်ချရပြီ။နတ်ပြည် ၆-ထပ် မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုအသာကလေး ရနိုင်တယ်လို့မမှိတ်မသုန်ယုံကြည်ကြရမယ်။သည့်ထက်ကောင်းတဲ့ ဂါထာမရှိဘူးဟူ၍ မှတ်။
ဘယ်လို အန္တရာယ်ကင်းတယ် စီးပွားတက်မယ်ဆိုပြီး သူပြော လူပြော ဘုရားဟော မဟုတ်တဲ့ဂါထာအသစ်အဆန်းတွေ မလိုက်ကြနဲ့။ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ ဆိုတဲ့ သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးနှင့် အရဟံ စသောဂုဏ်တော်မူရင်းတွေထက် ကောင်းတဲ့ဂါထာဘယ်မှာရှိလိမ့်မတုန်း။ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိဓမ္မံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ သံဃံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ
(နယ်ခြားတောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိက ဦးဥတ္တမသာရ) လုံးစုံများစွာ၊ သတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ဥပဒ်ရန်ဘေး၊ကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေ။အပ္ပမာဒေနသမ္မာဒေထ #crd